Sida loo dar Dhowr AVI Files galay Mid ka mid ah
> Resource > Video > Sida loo dar Dhowr AVI Files galay Mid ka mid ah
Ever soo bixi filim internetka si aad u hesho video waxaa loo kala qaybiyey qaybo kala duwan? Ma rabtaa inaad iyaga geeyo mid ka mid dhameystiran? Waa hagaag, waxa aad u baahan tahay waa qalab si sahlan loo isticmaalo video tafatir sida Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ). Sidaa daraadeed, waxaad si deg deg ah isku dari kartaa kuwa videos AVI kala qaybsamo qasabno yar. Hadda hubi hagaha dhabar jab ku tallaabo-tallaabo in la arko sida la isu geeyo files AVI mid.
1 dejinta files AVI aad
Isticmaalka Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ma noqon karaan kuwo fudud. Just ordi barnaamijkan, dooro "16: 9 Widescreen" ama "4: 3 Standard" doorasho u file video cusub. Markaas riix "Import" in browser iyo darto files AVI si aad u Murayaad Warbaahinta.
Waxaas oo dhan files laga keeno waxaa lagu soo bandhigaa sida thumbnails in ay leeg- bidix. Tusi sida belows.
2 Isku files AVI kuwaas
Markaasay bilaabi isku badan files AVI wada. Mid mid si ay waqtiga Jiid-n-hoos u files iyo aan hubsado in ay tahay in si sax ah. Markaas dhammaan faylasha la xidhiidhiyo doonaa. By default, waxaa jira kala-guurka inta u dhaxaysa file avi kasta lahayn. Laakiin haddii aad rabto in lagu daro saamayn KMG ah, raac tallaabo 3.
3 dar-guurka dhexeeya files AVI (optional)
Iyadoo Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor), waxa kale oo aad ku dari kartaa kala guurka oo u dhexeeya AVI gudbiyo si ay u sameeyaan files AVI mideeyey xunna iyagoo ku soo socda. In sidaa la yeelo, tag "guurka" tab iyo ku eegaan kala guurka kala duwan oo ay bixiyaan Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor). Jiid kala guurka la jecel yahay in file AVI iyo labo gool waxa ay ku dhufo si ay ula qabsadaan goobaha ee muddada iyo ka badan.
4 dhoofinta file video AVI
Hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u dhoofiyaan AVI ah video cusub. Hit ah "Abuur" button in la isu geeyo server AVI video clips in file hal. In ka "Qaabka" tab, xulo qaab gaar ah ka mid ah liiska. Waxaa loola jeedaa in, waxaad badbaadin kartaa file ee qaabka AVI asalka ama waxaa loogu badalo in ay qaab cusub. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) wuxuu taageeraa oo dhan qaabab video oo caan ah. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari faylasha AVI cusub oo ku saabsan iPod, iPhone, iPad iyo qalabka kale, doortaan "Device" dooro thumbnail qalab ka mid ah liiska ku. Waxa kale oo aad si toos ah u gali kartaa video isku dhafan si YouTube ama DVD gubi in cajalladaha loogu daawashada TV-ga.
Marka dhan ayaa diyaar u ah ku dhufatey "Abuur" badhanka si ay u bilaabaan processing. Waxaad arki doontaa horumarka on bar horumarka. Marka horumarka ay ka badan tahay, folder ay ku jiraan faylka cusub furi doonaa si toos ah.
Iyo in waxa kaliya - aad AVI oo dhan video files hadda noqday qayb ka mid ah file hal.